6 waxyaabood oo laga bartay kulankii maanta dhexmaray kooxaha Banaadir Sports Club iyo Muqdisho United – Gool FM
6 waxyaabood oo laga bartay kulankii maanta dhexmaray kooxaha Banaadir Sports Club iyo Muqdisho United
(Muqdisho) 21 Nof 2016 – Kulan aad u xiiso badan ayaa galabta ka dhacay garoonka Banaadir Ex Koonis ee Dagmada C/casiis, kaasoo u dhexeeyey kooxda horyaalka xafidanaysa xilli ciyaareedkan ee Banaadir Sports Club iyo Muqdisho United.
Ciyaartan ayaa ahayd middii saddexad ee laga ciyaaro horyaalka dalkeenna Soomaaliya ee 2016/17, waxayna ciyaartan ku soo idlaatay 3-1 oo lagu awood sheegtay kooxda Muqdisho United, kooxda horyaalka difaacanaysa ee Banaadir Sports Club ayaana heshay saddexdeedii dhib ee ugu horreeyey horyaalka.
1- Kooxda Muqdisho United ayaa noqotay naadiga kaliya ee aan wax jaalle ah guddoomin bilowdgeeda horyaalka Soomaaliya xilli ciyaareedkan iyagoo guul darro la kulmay.
2- Laacibka reer Nigeria ee Mustafa Maxwell ayaa dhaliyey labo gool, waxaana uu noqday xidiggii ugu horreeyay ee horyaalka ee ansixiyey labo gool kulankiisa ugu horreeya ee xilli ciyaareedkan.
3- Ciyaaryahan Ataf ayaa ka horyimid kulankiisii ugu horreeyey naadigiisii hore ee Banaadir SC, isagoo matalayey kooxda Muqdisho United.
4- Banaadir Sports Club ayaa guddoontay saddax kaar oo kuwa digniinta ah (Jaalle), ayagoo saddax gool kaga adkaaday dhigooda Muqdisho United.
5- Kooxda Muqdisho United ayaa sameysay shan iskuday gool, ayagoo ka faa’iideysatay mid ka mid ah kaa oo oo ay ku ansixiyeen goolka madiga ah ee ay ciyaartan ka dhaliyeen.
6- Kabtan Daadir Amiin ayaa sameeyey caawintiisii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan kulankii maanta, waxaana uu sababteeda lahaa goolkii saddaxaad ee uu dhaliyey Mustafa Maxwell.
Hadaba ciyaartani waxa garsooraye Cumar Cabdi qaadir.
Waxana uu bixiyey seddax jaale: Imam ayaa qaatay jaalahii ugu horeeyey ee garoonka daqiiqada markii ay aheyd 29 daqiiqo,halka jaalaha labaad ee ciyaarta uu gudoomay Marcel simsom,daqiiqadii 37,sidoo kale cali cumar cali ayaa la siiyey jaalaha seddaxaad ee ciyaarta daqiiqadii 65.
Dhinaca kale bedellada labada kooxood ay sameeyeen ayaa kala ahaa:-
Banaadir SC ayaa bedel ku soo gilisay xiddigaha kala ah Cabdi Fitaax ilka-case oo lagu bedelay Imam, halka Maxamed Cabdi-risaaq lagu bedelay Maxamed, bedelka ugu dambeeyay ayaa ahaa Baanoow oo lagu bedelay Irshaad.
Muqdisho United ayaa bedel ku soo gilisay xiddigaha kala ah Shuceyb Cismaan oo lagu bedelay Yaasiin Mustaf, halka ciyaaryahan Saalax laga saaray ciyaarta isagoo bedelkiisa uu soo galay Cabdi Maxamed Ibraahim, midka ugu dambeeya ayaana ahaa Ibraahim Abuukar oo lagu bedelay laacibkii hore kooxda Elman Muqtaar Gureey.
BYE BYE BARCELONA: Hector Bellerin oo heshiis waqti dheer ah u saxiixay Arsenal